I-TIFF 2021: 'IDashcam' iyinselele, i-Chaotic Thrill Ride
Ikhaya Ama-movie ama-Horror I-TIFF 2021: 'IDashcam' iyinselele, i-Chaotic Thrill Ride
Kunzima ukubukwa, kepha awukwazi ukubuka kude
by UKelly McNeely September 12, 2021
by UKelly McNeely September 12, 2021 689 ukubukwa
Umqondisi uRob Savage uba yinkosi entsha yokwethuka. Amafilimu akhe enza ukwesaba ngokuzimisela okuzimisele; wakha ukungezwani, wakukhipha ngokuhleka okuncane, bese eqhubekela phambili ezithusheni eziphumelelayo - noma ngabe kulindelwe - ziyaduma ngokumangazayo. Ngefilimu yakhe yokuqala, Host, USavage udale impilo yesikrini ehlaba umxhwele efakwe ngokuphelele ku-Zoom ngesikhathi sokuvalwa okukhulu kwe-COVID-19 yango-2020. Idashcam, livestreams ukwesaba okuvela emahlathini amnyama aseNgilandi.
I-Dashcam kulandela umsakazi we-inthanethi oyimbangela oziphatha kwakhe nge-anarchic kubangela iphupho elibi elingami. Kwifilimu, u-dj we-dashcam ozithandayo ogama lakhe lingu-Annie (odlalwa ngu umculi wangempela u-Annie Hardy) ushiya i-LA ayofuna ikhefu eliwumqedazwe eLondon, ashayeke efulethini lomngani wakhe nowayeyilungu lomlingani, uStretch (I-Amar Chadha-Patel). I-anti-liberal, i-vitriol-spewing ka-Annie, isigqoko se-MAGA esisebenzisa isimo sengqondo sihlikihla intombi kaStretch ngendlela engafanele (ngokuqondakalayo), futhi uhlobo oluthile lwesiyaluyalu lumlimaza kakhulu kunokuhle. Ubamba imoto azulazule emigwaqweni yaseLondon, bese enikezwa inqwaba yemali yokuhambisa owesifazane ogama lakhe lingu-Angela. Uyavuma, bese eqala usizi lwakhe.
U-Annie ungumlingiswa onelukuluku. Uyabukeka futhi uyabukeka, unengqondo esheshayo futhi uvaliwe. Ukusebenza kukaHardy kuhamba ngale ntambo ngamandla anganaki; U-Annie (njengomlingiswa) - ngezinye izikhathi - akathandeki ngendlela eyethusayo. Kepha kukhona okuthile ngaye ongeke nje uyeke ukubuka.
Ngokusobala - njengoba kuchaziwe esethulweni sokubuka kuqala esivela eSavage - ifilimu yayingenaso iskripthi (ngomqondo oqinile wenkhulumomphendvulwano ebhaliwe), ngakho-ke imigqa yenkhulumomphendvulwano ka-Annie ikakhulu (uma kungenjalo ngokuphelele) yathuthukiswa. Ngenkathi uHardy uqobo engabamba izinkolelo ezithile, u-Annie we I-Dashcam yinguqulo yakhe enehaba. Ukhala ngokuthi i-COVID ingumkhonyovu, uhlasela ama-feminazis kanye nokunyakaza kwe-BLM, futhi wenza umonakalo esitolo ngemuva kokucelwa ukuthi afake imaski. U… uhlobo olubi kakhulu.
Kungukukhetha okuthokozisayo futhi okunesibindi, ukubeka ifilimu ezandleni zomlingiswa owesabeka ngokweqile. Kuyasiza ukuthi u-Annie ubukhali impela, futhi ungumculi onethalente elinobuciko bokubhala ngokusobala okusobala endaweni. Sithola amazwibela alokhu ngefilimu, kepha kulapho ama-Hardy freestyles ekugcineni abonisa ukuthi simbona entweni yakhe. Kuyathakazelisa ukuthi iBand Car - umbukiso u-Annie emotweni yakhe - empeleni umbukiso wangempela ku-Happs nabalandeli abangaphezu kuka-14k. Lokhu, empeleni, kunjalo ukuthi uSavage wamthola kanjani. Wadonselwa yinhlekelele yakhe ehlukile nobuqili bokuzenzakalela, futhi wacabanga ukuthi kungaba kuhle ukuphonsa inguqulo yalokhu esimweni esesabekayo.
Uma kukhulunywa ngo-Annie njengomlingiswa, uyinhlobo yezinkolelo ezithile eziphathelene nezenhlalo, futhi nakanjani uzobangela ukwahlukana ezimweni zengqondo ngale filimu. Kepha uma kukhona noma yiluphi uhlobo oluvumela izinhlamvu ezihlukanisayo ukuthi zihole, kuyethusa.
I-Dashcam mhlawumbe ibonwa kangcono kusikrini esincane, noma okungenani kusuka emigqeni embalwa yangemuva enkulu. Umsebenzi wekhamera uvame ukuxegisa - kakhulu Ukuthuthumela - futhi isenzo sesithathu sefilimu singena komunye wemisebenzi yekhamera eshaqisayo, engaqondakali engiyibonile. Ngaphandle kwesihloko, ikhamera ivame ukushiya udwi. U-Annie uyagijima, akhase, futhi ashaye nekhamera ngesandla, futhi kungaba yinselele ukuthola ukuthi kwenzakalani.
Okubi kakhulu ukuthi iningi lefilimu kunzima ukulibuka, ngenxa yomsebenzi wekhamera ontengantenga ngokweqile. Ukube bekunamathele ngombono wedashcam - kuya ku umbhejazane - bekungaba lula ukulandela, kepha futhi bekungalahla inhlansi enkulu ebhebhethekisa umlilo wefilimu.
Into eyodwa engiyazile engaziyo ukuthi izokhathaza abanye ababukeli ukuthi imicimbi kunalokho… ayichazwanga. Asazi ngempela ukuthi kwenzekani noma kungani. Ekuvikeleni uzungu oludidayo, kuvumela ukuguquguquka okuningi futhi kunezela izinga elingejwayelekile leqiniso emicimbini.
Uma ufakwa esimweni esesabekayo, yiziphi izingqinamba ozozithola lapho uqopha umsindo leyo mininingwane futhi ichaza yonke imicimbi oyibonile. Noma ukuthi uzozinika isikhathi sokufunda incwadi noma i-athikili esanda kutholakala, noma ubuze ufakazi onolwazi olujulile ngokwenzekayo. Akunakwenzeka, yilokhu engikushoyo. Ngandlela thile, yilokhu kudideka nokungaqondakali okwenza okungokoqobo kube ngokoqobo ngokwengeziwe.
Kunezikhathi ezithile ezinhle kakhulu zokudutshulwa kwehlombe okubandayo ngempela futhi okuhle kakhulu ekwakheni ukwethuka okusebenzayo. USavage uthanda ukusaba okuhle kweqa, kepha kugcizelelwa okuhle lapha. Uyakwazi akwenzayo, futhi ubadonsa kahle.
Nakuba Host ukhombise ukusondelana ekhaya, I-Dashcam welula imilenze yayo kancane ngokuya emhlabeni futhi ahlole izindawo eziningi, i-creepier ngayinye kunale yokugcina. Ngokwesekwa ngumkhiqizi wezinhlobo ezinkulu uJason Blum, iSavage iguqula imiphumela emikhulu, enegazi ekhala kakhulu kwabathobekile Host-era lockdown do-it-ngokwakho yokugibela. Ngalokhu kungokokuqala kwe- isivumelwano sezithombe ezintathu neBlumhouse, ngifisa ukwazi ukubona ukuthi yini eza nayo ngokulandelayo njengoba umhlaba uvula kancane.
I-Dashcam ngeke ihehe wonke umuntu. Ayikho ifilimu eyenzayo. Kepha isimo sikaSavage sokuhambisa phansi insimbi mayelana nokwesabeka kuyajabulisa ukusibuka. Njengoba I-Dashcam ithatha ijubane, indiza ngokuphelele ojantshi futhi ikhuphukele ekwesabeni okumsulwa okuyisiphithiphithi. Ifilimu yokuvelela kakhulu ene-protagonist ehlukanisayo kanye ne-horror evulekile, futhi nakanjani izophendula amakhanda. Umbuzo uthi, mangaki amakhanda azophenduka.